Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 Torch — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 9850 / 9860 Torch ‎ → ‎
Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 Torch
The esiphezulu thembeke ukuvikela ifoni yakho esuka ezingezinhle namathonya zangaphandle. accessory ye echachambile uyisithelo esiyisimanga.
Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 kunazo thembeke ukuvikela ifoni yakho esuka ezingezinhle namathonya zangaphandle (uthuthumele, imihuzuko, ukungcola).
Frame eyenziwe ngepulasitiki eziqinile, usinikeza isivikelo esengeziwe futhi indawo ekahle ngaphakathi kwesembozo ifoni futhi lesikhumba ingaphakathi lid evimbela imihuzuko esibukweni bese ithambisa igalelo ekwindla. Amathuba amatheku (Audio, Amakhamera, USB) inikeza ukufinyelela okusheshayo kuzo, ungakwazi, isibonelo, ulalele umculo, ngaphandle kokuba ukukhipha ikhava. Luhlakasimo isembozo mpo kuyinto elula kakhulu: ikuvumela ukuba ukususa wafaka ifoni yakho kalula.
Nakuba izinga cover ukuvikelwa ubukeka ngempela nenhle: imigqa ogeleza, Ubukhulu ezincane, line olunembile, leli bhuloho emincane vala ikhava phezulu. Case kuyinto ngempela mncane futhi ukukhanya. Perfect nganoma yisiphi isitayela yokugqoka.
Case ezinombala ofanayo, emelelwa evele ezintathu: a smooth ukuthungwa esiqinile Classic, neqondayo, kodwa aminyene "zelineni" ukuthungwa kakhulu, futhi ekugcineni, ngoba abalandeli babo bonke fashion — option enhle lacquered ingwenya isikhumba. Bheka izithombe, khetha ikhava yakho!
Black nge ukuthungwa yelineni
Black nge ukuthungwa emihle
Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 Torch, Black nge ukuthungwa yelineni 9860CASE-VO-FL-BK ●
Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 Torch, Black nge ukuthungwa emihle 9860CASE-VO-S-BK ●
Isikhumba icala isembozo ukuvulwa mpo ngoba BlackBerry 9850 / 9860 Torch, Black "Crocodile" 9860CASE-VO-KR-BK ●
Black nge ukuthungwa yelineni 9860CASE-VO-FL-BK
Black nge ukuthungwa emihle 9860CASE-VO-S-BK